Rwendo rwezuva kuenda kuSalzburg kubva kuVienna
Rwendo rweZuva kuenda kuSalzburg
Corpus Christi muAustria
MuNeustadt yeSalzburg, iyo inonziwo Andräviertel, kuchamhembe kweMirabell Gardens, kune nzvimbo yakarwiwa, yakamisikidzwa yelawn, iyo yakashongedzwa, inonzi Kurpark, uko nzvimbo yakatenderedza Andräkirche yakagadzirwa mushure mekuparadzwa kweiyo yaimbova huru bastion. . Bindu re spa rine miti yakati wandei yakadai sechando uye zhizha linden, Japanese cherry, robinia, katsura muti, muti wendege uye Japanese maple.
Nzira yetsoka yakatsaurirwa kuna Bernhard Paumgartner, uyo akazozivikanwa kuburikidza nehupenyu hwake pamusoro peMozart, inofamba ichitevedza muganhu neguta rekare uye inobatanidza Mariabellplatz nemusuo unobva kuKurpark kusvika pauriri hwepasi, kuchamhembe kweMirabell Gardens. Nekudaro, usati wapinda mumagadheni iwe ungangoda kuwana chimbuzi cheruzhinji kutanga.
Ukatarisa Salzburg uri kumusoro unoona kuti guta racho riri parwizi uye rakaganhurwa kumativi ose nezvikomo zvidiki. Kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero nearc yedenderedzwa rine Festungsberg neMönchsberg uye kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva neKapuzinerberg.
Gomo renhare, Festungsberg, nderekumucheto kwekuchamhembe kweSalzburg Pre-Alps uye rinosanganisira zvakanyanya Dachstein limestone. Mönchsberg, Monks' Hill, ine conglomerate uye inobatanidza kumadokero kwegomo renhare. Haina kudhonzwa kure neSalzach Glacier nekuti yakamira mumumvuri wegomo renhare.
Iyo Kapuzinerberg, kurudyi rwerwizi segomo renhare, ndeyekumucheto kwekuchamhembe kweSalzburg Limestone Pre-Alps. Iyo ine zviso zvematombo ane mawere uye nzvimbo yakafara uye inogadzirwa zvakanyanya neyakaomesesa Dachstein limestone nedombo re dolomite. Kukwesha kweSalzach Glacier kwakapa Kapuzinerberg chimiro chayo.
Imba yekudyira yeruzhinji paMirabell Gardens Square muSalzburg
Iyo Mirabell Gardens inowanzova nzvimbo yekutanga yekushanyira parwendo rwezuva kuenda kuSalzburg. Mabhazi anosvika muSalzburg City anoregedza vafambi vawo kuti vaburuke iyo T-junction yeParis-Lodron mugwagwa une Mirabell Square uye Dreifaltigkeitsgasse., chiteshi chebhazi kuchamhembe. Mukuwedzera kune nzvimbo yekupaka motokari, iyo CONTIPARK Parkplatz Mirabell-Congress-Garage, paMirabell Square iyo kero chaiyo ndeye Faber Straße 6-8. Ichi chi the link kuti usvike panopaka mota negoogle mepu. Kungomhiri kwemugwagwa paMirabell Square nhamba 3 kune chimbuzi cheveruzhinji chemahara. Iyi link kune google maps inokupa iyo chaiyo nzvimbo yechimbuzi yeruzhinji kuti ikubatsire kuiwana mukamuri repasi pechivako chiri pazasi pemumvuri unopa miti.
Unicorn paSalzburg Mirabell Gardens
A neo-baroque marble staircase, achishandisa zvikamu zvebalustrade kubva kuguta rakaputswa theatre uye unicorn zvidhori, inobatanidza Kurgarten kuchamhembe nediki pasi pasi reMirabell Gardens kumaodzanyemba.
Unicorn imhuka inoita kunge a bhiza aine nyanga pahuma yayo. Inonzi imhuka inotyisa, yakasimba uye inoyevedza, inofamba netsoka zvokuti inogona kubatwa chete kana mhandara yaiswa pamberi payo. Unicorn inosvetukira mumakumbo emhandara, inoyamwa uye inotungamirira kumuzinda wamambo. Matanho eterrace akashandiswa seyekusvetuka mimhanzi naMaria nevana von Trapp muRuzha rweMimhanzi.
Unicorns paMatanho kuenda kuMirabell Gardens
Maviri makuru ematombo eunicorns, mabhiza ane runyanga pamusoro pavo, akarara pamakumbo avo anorinda "Musical Matanho", gedhi rekuchamhembe kwekupinda kuMirabell Gardens. Vaduku, asi vasikana vanofungidzira vanonakidzwa kuvatasva. Unicorns zvinongorara zvakati sandarara pamasitepisi kuitira kuti vasikana vadiki vatsike paari chaipo. Mhuka dzepamagedhi dzinoita sedzinokurudzira fungidziro dzevasikana. Muvhimi chete ndiye anogona kukwezva unicorn nemhandara yakachena. Iyo unicorn iri kukwezvwa nechinhu chisinga taurike.
Mirabell Gardens inoonekwa kubva ku "The Musical Matanho"
Iyo Mirabell Gardens igadheni rebaroque muSalzburg iro riri chikamu cheUNESCO World Heritage Historic Center yeGuta reSalzburg. Dhizaini yeMirabell Gardens muchimiro chayo ikozvino yakapihwa basa naPrince Archbishop Johann Ernst von Thun vachitungamirwa naJohann Bernhard Fischer von Erlach. Muna 1854 Mirabell Gardens yakavhurwa kune veruzhinji naMambo Franz Joseph.
Mirabell Palace yakavakwa muna 1606 nemuchinda-archbishop Wolf Dietrich kumudiwa wake Salome Alt. Iyo "Baroque Marble Staircase" inotungamira kuMarble Hall yeMirabell Palace. Masitepisi mana ekubhururuka ane mukurumbira (1722) anobva pamagadzirirwo akaitwa naJohann Lucas von Hildebrandt. Yakavakwa muna 1726 naGeorg Raphael Donner, muvezi akakosha weCentral European wenguva yake. Panzvimbo peiyo balustrade, inochengetedzwa neinofungidzira parapets yakagadzirwa neC-arcs uye mavholuti ane putti yekushongedza.
Akareba, ane bvudzi rakatsvuka dzvuku uye maziso egrey, Salome Alt, mukadzi akanaka kwazvo mutaundi. Wolf Dietrich akamuziva panguva yemutambo mukamuri yekunwa yeguta paWaagplatz. Ikoko matare ehurumende ekanzuru yeguta akaitirwa uye mabasa edzidzo akaguma. Mushure mekusarudzwa kwake seMuchinda Archbishop Wolf Dietrich akaedza kuwana nguva yaizogoneka kuti iye semufundisi aroorwe. Pasinei nekuedza kwekuyananisa nababamunini vake, Cardinal Marcus Sitticus von Hohenems, chirongwa ichi chakakundikana. Muna 1606 aive neAltenau castle, yave kunzi Mirabell, yakavakirwa Salome Alt, yakafananidzwa neRoman "Ville suburbane".
Pegasus pakati Shumba
Bellerophon, gamba guru uye muurayi wezvikara, anotasva bhiza rinobhururuka rakabatwa. Basa rake guru raive kuuraya chikara kauhukuva, chitunha chembudzi chine musoro weshumba nemuswe wenyoka. Bellerophon akawana kusafarirwa kwevamwari mushure mekuyedza kukwira Pegasus kuenda Gomo reOlympus kuti ubatane navo.
Pegasus tsime kuti Maria nevana vanosvetuka kubva muRuzha rweMumhanzi vachiimba Do Re Mi. Pegasus, the ngano Mwari bhiza ndiye chizvarwa che Olimpiki Mwari Poseidon, mwari wemabhiza. Kwose kwose bhiza rine mapapiro rakarovera pasi mahwanda aro, pakabuda chitubu chemvura inopisa.
Shumba Dzirinda Bastion'Masitepisi
Shumba mbiri dzematombo dzakarara pamadziro emadziro, imwe pamberi, imwe yakasimudzwa zvishoma yakatarisa mudenga, chengetedza musuwo kubva pauriri hwepasi kuenda kubindu rebastion. Paive neshumba nhatu pajasi remaoko eBabenbergs. Kurudyi kweSalzburg state coat of arms kune shumba nhema yakatwasuka yakachinjika kurudyi mune goridhe uye kuruboshwe, sepaBabenberg jasi rezvombo, inoratidza bhara resirivha mutsvuku, nhoo yeAustria.
Zwergerlgarten, iyo Dwarf Gnome Park
Bindu rakasviba, rine zvivezwa zveMount Untersberg marble, chikamu chebindu reBaroque Mirabell rakagadzirwa naFischer von Erlach. Munguva yeBaroque, vanhu vakakura uye vapfupi vaishandiswa mumatare mazhinji eEurope. Vaikosheswa nokuda kwokuvimbika kwavo nokutendeka. Madzviti anofanira kubvisa zvakaipa zvese kure.
Western Bosket ine Hedge Tunnel
Iyo yakajairika baroque bosquet yaive "huni" diki rakachekwa zvine hunyanzvi mubaroque Mirabell gadheni reFischer von Erlach. Miti nemaheji zvaifambiswa neakisi yakatwasuka ine horo yakaita sehoro. Bhokisi racho nokudaro rakagadzira mubatanidzwa kune chivakwa chenhare nemakorori ayo, masitepisi nehoro uye yakashandiswawo nenzira yakafanana neyomukati meimba yemitambo yemitambo yekamuri makonti uye zvimwe zvidiki zvinovaraidza. Nhasi bhokisi rekumadokero reMirabell castle rine mitsara mitatu "avenue" yemiti yechando ye linden, iyo inochengetwa mune geometrically cube-yakaita chimiro nekucheka nguva dzose, uye arcade ine round arch trellis, iyo hedge tunnel Maria nevana vanomhanya vachidzika vachiimba Do Re Mi.
Red tulips mune baroque yemaruva mubhedha dhizaini mubindu rakakura parterre reMirabell Gardens, kureba kwayo kwakanangidzirwa kumaodzanyemba munzira yeHohensalzburg fortress pamusoro peguta rekare kuruboshwe rweSalzach. Mushure mekusasimudzwa kweArchdiocese yeSalzburg muna 1811, gadheni rakadudzirwa zvakare mune yazvino Chirungu landscape garden style naCrown Prince Ludwig weBavaria, pamwe nechikamu chenzvimbo dzebaroque dzichichengetedzwa.
Muna 1893, nzvimbo yebindu yakaderedzwa nekuda kwekuvakwa kweSalzburg Theatre, inova chivako chikuru chekuvaka chakatarisana nekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero. Salzburg State Theatre paMakartplatz yakavakwa nekambani yeViennese Fellner & Helmer, iyo yainyanya kuvakwa kwemitambo yemitambo, seNew City Theatre mushure meiyo theatre yekare, iyo Prince Archbishop Hieronymus Colloredo akavaka muna 1775 pachinzvimbo cheimba yebhora. kuparadzwa nekuda kwekushomeka kwekuchengetedza.
Zvivezwa zve "Borghesi fencers" pamusuwo weMakartplatz zvakanyatsoenderana nemifananidzo yakavakirwa pachivezwa chekare kubva muzana ramakore rechi 17 chakawanikwa pedyo neRoma uye chiri muLouvre izvozvi. Chifananidzo chekare chehukuru hwehupenyu hwemurwi anorwa nemutasvi anonzi Borghesian fencer. Iyo Borghesian fencer inosiyaniswa nekukura kwayo kweanatomical uye nekudaro yaive imwe yezvivezwa zvinoyemurwa muhunyanzvi hweRenaissance.
Muna 1694 Muchinda Archbishop Johann Ernst Graf Thun naHohenstein vakasarudza kuvaka imba itsva yevaprista' yemakoreji maviri akavambwa naye pamwe chete nechechi yakatsaurirwa kuUtatu Hutsvene, Dreifaltigkeitskirche, kumiganhu yekumabvazuva kwegadheni reHannibal panguva iyoyo, nzvimbo yakatenuka. nzvimbo iri pakati pegedhi rekare uye Mannerist Secundogenitur palace. Nhasi, nzvimbo yeMakart, yaimbova gadheni reHannibal, inotungamirirwa nefaçade yeHoly Trinity Church iyo yakamiswa naJohann Bernhard Fischer von Erlach pakati pezvivakwa zvekoreji, imba itsva yevapristi'.
Imba yaMozart paMakart Square muSalzburg
Mu "Tanzmeisterhaus", imba nhamba. 8 paHannibalplatz, nhanho inokwira, diki, ine rectangular yakatarisana neakisi refu yeTrinity Church, iyo yakatumidzwa zita rekuti Makartplatz munguva yehupenyu hwemuimbi akagadzwa kuVienna naMambo Franz Joseph I. mutungamiriri wekutamba wedare akabata zvidzidzo zvekutamba vapfumi, Wolfgang Amadeus Mozart nevabereki vake vaigara mufurati pauriri hwekutanga kubva 1773 kusvika atamira kuVienna muna 1781, ikozvino museum mushure mefurati muGereidegasse kwakaberekerwa Wolfgang Amadeus Mozart yakanga yava diki.
Pakati peshongwe dzakabudikira, facade ye Holy Trinity Church inozungunuka mugomba nepakati nehwindo rakatenderedzwa rakakomberedzwa rine mitsetse, pakati pemapilasta maviri neanoratidzwa, akabatanidza makoramu maviri, akavakwa naJohann Bernhard Fischer von Erlach kubva 1694 kusvika 1702. Towers kumativi ose ane mabhero uye wachi gables. Pamusoro pedenga remba, jasi remaoko emuvambi ane gonyera nebakatwa, sechinyakare chiratidziro chechimiro chePrince Archbishop Johann Ernst von Thun naHohenstein, avo vakashandisa zvese zviri zviviri simba rake remweya uye renyika. Concave central bay inokoka muoni kuti aswedere pedyo apinde muchechi.
Tambo, inobatanidza, cylindrical, yakavhurika-hwindo yekubatanidza pakati pechechi nedome, yakakamurwa kuita zvikamu zvisere zvine mahwindo madiki ane rectangular kuburikidza neakapfava maviri pilaster. Iyo dome fresco yakagadzirwa naJohann Michael Rottmayr kutenderera 1700 uye inoratidza kugadzwa kwaMaria nerubatsiro rwengirozi tsvene, vaporofita nemadzitateguru.
Pasirin'i pane yechipiri diki diki tambour zvakare yakagadzirwa nemahwindo ane rectangular. Johann Michael Rottmayr ndiye ainyanya kuremekedzwa uye akabatikana pakupenda weBaroque yekutanga muAustria. Aikosheswa zvakanyanya naJohann Bernhard Fischer von Erlach, maererano nemagadzirirwo avo eTrinity Church yakavakwa naPrince Archbishop Johann Ernst von Thun naHohenstein kubva 1694 kusvika 1702.
Imba huru yeovhari inotongwa nechiedza chinopenya nepahwindo semicircular riri pamusoro peatari huru, iyo yakakamurwa kuita marectangles madiki, umo madiki marectangles anozopatsanurwa kuita anonzi slug panes muhuchi offset. Atari yakakwirira pakutanga inobva kune yakagadzirwa naJohann Bernhard Fischer von Erlach. Atari reredos iaedicula, chivakwa chemarble chine mapilasta uye yakatsetseka yakakamurwa arch gable. Utatu Hutsvene nengirozi mbiri dzinonamata dzinoratidzwa seboka repurasitiki.
Puripiti ine muchinjikwa wemuparidzi inopinzwa mumadziro niche kurudyi. Mapeji ari pamadziro mana ane diagonal pauriri hwemarble, iyo ine pateni inosimbisa ovha yekamuri. Mune iyo crypt mune sarcophagus ine moyo wemuvaki Prince Archbishop Johann Ernst Count Thun naHohenstein zvichibva pane yakagadzirwa naJohann Bernhard Fischer von Erlach.
Linzer Gasse, mugwagwa mukuru wakareba weguta rekare reSalzburg kubhanga rekurudyi reSalzach, unotungamira uchikwira kubva paPlatzl uchienda kuSchallmoserstraße wakananga kuVienna. Nguva pfupi mushure mekutanga kweLinzer Gasse pakureba kweStefan-Zweig-Platz Gedhi reFrancis riri kurudyi, kumaodzanyemba, kudivi reLinzer Gasse. Francis Gedhi inzira yakakwirira ine nhurikidzwa mbiri, iyo rustic-inofananidzwa gedhi rekuenda kuStefan-Zweig-Weg kuenda kuFrancis Port uye kuCapuchin Monastery kuCapuzinerberg. Mukati meiyo archway pane yakavezwa mauto cartridge ine jasi remaoko raCount Markus Sittikus weHohenems, kubva 2 kusvika 1612 muchinda bhishopi wearchfoundation Salzburg, muvaki weFrancis Gate. Pamusoro pekaturiji yeuto pane zororo pane kushorwa kweHL. Francis mukugadzira neyakavhuvhuta gable inoratidzwa, kubva 1619.
Mhino nhoo muLinzer Gasse Salzburg
Kutarisisa kwemufananidzo wakatorwa muLinzer Gasse kuri pamabhuraketi esimbi akagadzirwa, anozivikanwawo senhoo dzemhino. Artisanal mhino nhoo dzakagadzirwa nesimbi nevapfuri vesimbi kubva kuMiddle Ages. Iyo craft yakashambadzirwa inokweverwa kutarisa kune nezviratidzo sekiyi. Masangano masangano emhizha akagadzirwa muMiddle Ages kuchengetedza zvido zvakafanana.
MuLinzer Gasse nhamba. 41 kune Chechi yeSebastians ine divi rayo rekumaodzanyemba-kumabvazuva kureba uye shongwe yayo yefaçade inoenderana neLinzer Gasse. Chechi yekutanga yeSt. Sebastian yakatanga kubva 1505-1512. Yakavakwazve kubva 1749-1753. Iyo artari yakakwirira muapse yakadzoserwa yakadzoreredzwa ine marble yakakomberedzwa zvishoma ine zvisumbu zvepilaster, mbiri yembiru dzakaratidzwa, dzakatwasuka cranked entablature uye volute pamusoro. Pakati pechifananidzo naMaria nemwana kubva kumativi 1610. Muchidimbu pane kusunungurwa kwaSaint Sebastian kubva muna 1964.
Kusvika kumakuva eSebastian kubva kuLinzer Straße iri pakati pekwaya yeSebastian Church neAltstadthotel Amadeus. Iyo semicircular arch portal, iyo yakaganhurwa nemapilaster, entablature uye kumusoro kubva 1600 ine gable rakaputika, iro rine jasi remaoko emuvambi uye muvaki, Prince Archbishop Wolf Dietrich.
Makuva eSebastian anobatana nechokuchamhembe-kumadokero kweChechi yeSebastian. Yakavakwa kubva muna 1595-1600 pachinzvimbo cheMuchinda Archbishop Wolf Dietrich panzvimbo yemakuva akange aripo kubva pakutanga kwezana ramakore rechi 16, akateedzerwa kuItaly Campi Santi. Camposanto, chiItalian che "munda unoyera", izita reItaly remakuva akavharirwa sechivanze ane mugwagwa wakavhurika mukati. Makuva eSebastian akakomberedzwa nemativi ese nembiru arcades. Iwo ma arcades akavharidzirwa ne groin vaults pakati pe arched belt.
Mumunda wemakuva aSebastian padyo nenzira inoenda kumausoleum, aifarira Mozart Johann Evangelist Engl aiva neguva rokuratidza rakanga rakavakwa raiva neguva remhuri yekwaNissen. Georg Nikolaus Nissen akava newanano yechipiri naConstanze, chirikadzi Mozart. Baba vaMozart Leopold zvisinei vakavigwa mune rinonzi guva revanhu vose rine nhamba 83, nhasi guva reEggersche riri kudivi rezasi remakuva. Wolfgang Amadeus Mozart anoradzikwa muSt. Marx muVienna, amai vake muSaint-Eustache muParis uye hanzvadzi Nannerl muSt. Peter muSalzburg.
Munich Kindl yeSalzburg
Pakona yechivako chiri pakona yeDreifaltigkeitsgasse / Linzer Gasse, iyo inonzi "Münchner Hof", chivezwa chakasungirirwa kumucheto wakabuda pauriri hwekutanga, unoratidza mumongi ane stylized ane maoko akasimudzwa, ruoko rweruboshwe rwakabata. bhuku. Bhachi rehurumende reMunich mumongi akabata bhuku remhiko muruoko rwake rworuboshwe, uye achiita mhiko kurudyi. Iyo jasi remaoko reMunich rinozivikanwa seMünchner Kindl. Iyo Münchner Hof inomira pakamira imba yekare kwazvo yekubikira doro muSalzburg, iyo "Goldenes Kreuz-Wirtshaus".
Iyo Salzach inoyerera kuchamhembe ichipinda muInn. Yakapiwa zita rayo kungarava yemunyu yaishanda murwizi. Munyu waibva kuHallein Dürrnberg ndiwo wainyanya kukosha kuwana mari kumaachibhishopu eSalzburg. Salzach neInn dzinomhanya kumuganhu neBavaria uko kwaivewo nemunyu muBerchtesgaden. Mamiriro ese ari maviri pamwechete akaumba hwaro hwemakakatanwa pakati peAchibhishopu weSalzburg neBavaria, ayo akasvika pakakwirira muna 1611 nekutorwa kweBerchtesgaden naPrince Archbishop Wolf Dietrich. Nekuda kweizvozvo, Maximilian I, Mutungamiriri weBavaria, akatora Salzburg uye akamanikidza Prince Archbishop Wolf Dietrich kusiya basa.
Kuburikidza nearch yehoro yedhorobha unotsika panzvimbo yedhorobha. Pakupera kwehoro yedhorobha shongwe yehoro yedhorobha inomira mumativi akisi yerococo facade yechivakwa. Shongwe yehoro yeguta rekare inomiswa nemapilaster makuru pamusoro pecornice nemakona mapilaster. Pashongwe yacho idiki ine hexagonal bhero tower ine multi-part dome. Iyo bhero shongwe ine mabhero maviri madiki kubva ku14th uye 16th mazana emakore uye bhero hombe kubva muzana ramakore rechi20. MuMiddle Ages, vagari vemo vaitsamira pabhero, sezvo wachi yeshongwe yaingowedzerwa muzana ramakore rechi 18. Bhero rakapa vagari pfungwa yenguva uye rairidzwa kana moto waitika.
Iyo Alte Markt irectangular square inobatwa parutivi rwakamanikana rwekuchamhembe neKranzlmarkt-Judengasse mugwagwa uye inokura mune rectangular chimiro kumaodzanyemba uye inovhura yakananga kune yekugara. Chikwere chakaumbwa nemutsara wakavharwa wedzimba dzakanaka, 5- kusvika 6-storey dzimba dzemataundi, mazhinji acho ari medieval kana kubva 16th century. Dzimba idzi dzine chikamu 3- kusvika 4-, chikamu 6- kusvika 8-axis uye kazhinji ine rectangular parapet windows uye profiled eaves.
Kuwanda kweakatetepa akashongedzwa mafacade ane akatwasuka hwindo canopies, slab style decor kana decor yakapfava kubva muzana ramakore re19 inosarudza chimiro chenzvimbo. Chimiro cheJosephine slab chakashandisa zvivakwa zviri nyore mumasabhubhu, izvo zvakange zvanyungudutsa tectonic order kuita zvidimbu zvemadziro nema slabs. Pakati penzvimbo yepedyo paAlter Markt inomira yaimbova musika tsime, yakatsaurirwa kuna St. Florian, ine Floriani column pakati petsime.
Mugodhi uneoctagonal tsime rakagadzirwa neUntersberg marble rakavakwa muna 1488 panzvimbo pechitubu chekare mushure mekunge pombi yemvura yekunwa yavakwa kubva kuGersberg pamusoro pebhiriji reguta kuenda kumusika wekare. Iyo yakashongedzwa, yakapendwa inotenderera grille patsime yakatanga kubva muna 1583, matende ayo anoguma ari magrotesque akagadzirwa nemashizha esimbi, ibexes, shiri, vatasvi nemisoro.
Iyo Alte Markt irectangular square inobatwa parutivi rwakamanikana rwekuchamhembe neKranzlmarkt-Judengasse mugwagwa uye inokura mune rectangular chimiro kumaodzanyemba uye inovhura yakananga kune yekugara.
Chikwere chakaumbwa nemutsara wakavharwa wedzimba dzakanaka, 5- kusvika 6-storey dzimba dzemataundi, mazhinji acho ari medieval kana kubva 16th century. Dzimba idzi dzine chikamu 3- kusvika 4-, chikamu 6- kusvika 8-axis uye kazhinji ine rectangular parapet windows uye profiled eaves.
Kuwanda kweakatetepa akashongedzwa mafacade ane akatwasuka hwindo canopies, slab style decor kana decor yakapfava kubva muzana ramakore re19 inosarudza chimiro chenzvimbo. Chimiro cheJosephine slab chakashandisa zvivakwa zviri nyore mumasabhubhu, izvo zvakange zvanyungudutsa tectonic order kuita zvidimbu zvemadziro nema slabs. Madziro edzimba dzacho akanga akashongedzwa nemitsetse yepilaster panzvimbo pemapilaster makuru.
Pakati penzvimbo yepedyo paAlter Markt inomira yaimbova musika tsime, yakatsaurirwa kuna St. Florian, ine Floriani column pakati petsime. Mugodhi uneoctagonal tsime rakagadzirwa neUntersberg marble rakavakwa muna 1488 panzvimbo pechitubu chekare mushure mekunge pombi yemvura yekunwa yavakwa kubva kuGersberg pamusoro pebhiriji reguta kuenda kumusika wekare. The Gersberg iri munzvimbo yekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero pakati peGaisberg neKühberg, iri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwechikomo cheGaisberg. Iyo yakashongedzwa, yakapendwa inotenderera grille patsime yakatanga kubva muna 1583, matende ayo anoguma ari magrotesque akagadzirwa nemashizha esimbi, ibexes, shiri, vatasvi nemisoro.
Pamwero weFlorianibrunnen, kumabvazuva kwechikwere, muimba nhamba. 6, ndiyo yekare muchinda-archbishop's court pharmacy yakavambwa muna 1591 mune imwe imba ine yakanonoka baroque hwindo mafaremu uye matenga ane apex volutes kubva pakati pezana ramakore rechi 18.
Iyo yekare muchinda-archbishop's court's court pharmacy pauriri hwepasi ine 3-axis shopu pamberi kubva kumativi 1903. Iyo yakachengetedzwa pharmacy, makamuri ekushanda emishonga, ane masherufu, tafura yemishonga pamwe chete nemidziyo nemichina kubva muzana remakore rechi18 iRococo. . The chitoro chemishonga yaimbowanikwa muimba yemuvakidzani no.7 uye yakangoendeswa kwairi ikozvino, imba no. 6, muna 1903.
Café Tomaselli paAlter Markt Nhamba 9 muSalzburg yakavambwa muna 1700. Ndiyo cafe yekare kudarika dzose muAustria. Johann Fontaine, akabva kuFrance, akapiwa mvumo yekubika chokoreti, tii nekofi muGoldgasse yaiva pedyo. Mushure mekufa kwaFontaine, chivharo chekofi chakachinja maoko kakawanda. Muna 1753, imba yekofi yeEngelhardsche yakatorwa naAnton Staiger, tenzi wedare raArchbishop Siegmund III. Count Schrattenbach. Muna 1764 Anton Staiger akatenga "Abraham Zillnerische anogara pakona yemusika wekare", imba ine 3-axis facade yakatarisana neAlter Markt uye 4-axis facade yakatarisana neChurfürststrasse uye yakapihwa madziro epasi anotsvedza. mafuremu emahwindo akapoteredza 1800. Staiger akashandura imba yekofi kuita nzvimbo inoyevedza yekirasi yepamusoro. Nhengo dzemhuri yekwaMozart nevekwaHaydn dzaishanyawo Café Tomaselli. Carl Tomaselli akatenga café muna 1852 uye akazarura kiosk yeTomaselli yakatarisana nekafesi muna 1859. Iyo vharanda yakawedzerwa muna 1937/38 naOtto Prossinger. Mushure meHondo Yenyika Yechipiri, maAmerican akashanda iyo cafe pasi pezita rekuti Forty Second Street Café.
Mozart Monument naLudwig M. Schwanthaler
Ludwig Michael von Schwanthaler, mwana wekupedzisira weUpper Austrian sculptor mhuri Schwanthaler, akagadzira Monument yeMozart muna 1841 pachiitiko chegore rechi50 rekufa kwaWolfgang Amadeus Mozart. Chivezwa chebhuronzi chakareba mamita matatu, chakakandwa naJohann Baptist Stiglmaier, mutungamiriri wenzvimbo yakavakirwa matombo ehumambo muMunich, chakamiswa munaGunyana 4, 1842 muSalzburg pakati peyaiva panguva iyoyo Michaeler-Platz.
Chimiro chebronze chekare chinoratidza Mozart mune contrapostal siketi yemazuva ano uye jasi, pendi, pepa remimhanzi (mupumburu) uye wreath yelaurel. Madimikira anourayiwa semabhuronzi anomiririra basa raMozart muminda yechechi, konzati uye mumhanzi wekamuri pamwe neopera. Mozartplatz yanhasi yakagadzirwa muna 1588 nekuputsa dzimba dzakasiyana dzemudhorobha pasi pePrince Archbishop Wolf Dietrich von Raitenau. Imba Mozartplatz 1 ndiyo inonzi New Residence, umo munogara Salzburg Museum. Chifananidzo cheMozart ndechimwe chezvinyorwa zvinonyanya kuzivikanwa zvepositadhi muguta rekare reSalzburg.
Drum Dome yeKollegienkirche muSalzburg
Kuseri kwenzvimbo yekugara, dhiramu dome reSalzburg Collegiate Church, rakavakwa munzvimbo yeParis Lodron University kubva 1696 kusvika 1707 naPrince Archbishop Johann Ernst Graf von Thun naHohenstein zvichibva pamagadzirirwo akaitwa naJohann Bernhard Fischer von Erlach achitungamirwa na dare aster mason Johann Grabner rakakamurwa octagonally nemabhawa maviri.
Pedyo nedhomu redhiramu pane shongwe dzine mitsetse yeChechi yeCollegiate, pamakona ayo unogona kuona zvidhori. Rambi, denderedzwa rakavhurika chimiro, rinoiswa padhiramu dome pamusoro peziso redome. Mumakereke eBaroque, mwenje unogaro gadzira magumo edome uye unomiririra kwakakosha kunobva chiedza chemasikati.
Iyo Residenzplatz yakagadzirwa naPrince Archbishop Wolf Dietrich von Raitenau nekubvisa mutsara wedzimba dzedhorobha paAschhof kutenderera 1590, diki diki rinoenderana neanhasi Hypo main building paResidenzplatz, iyo yakafukidza 1,500 m², uye makuva ecathedral, aive kuchamhembe kwe. iyo cathedral iripo. Sekutsiva nzvimbo yemakuva ekereke, makuva eSebastian akagadzirwa padyo nechechi yeSt. Sebastian mubhangi rekurudyi reguta rekare.
Mujinga meAschhof uye vakananga kudzimba dzetaundi, mudhuri wakasimba waitenderedza makuva ekereke panguva iyoyo, rusvingo rwenhare, rwaimiririra muganhu pakati peguta remuchinda netaundishipi. Wolf Dietrich akafambisawo madziro aya akananga kucathedral muna 1593. Aya ndiwo masikirwo akaitwa sikweya iri pamberi peimba yekare uye itsva, iyo yakazonzi main square.
Dare Arches Kubatanidza Cathedral Square naFranziskaner Gasse
Iyo inonzi Wallistrakt, iyo nhasi inogara chikamu cheParis-Lodron University, yakavambwa muna 1622 naPrince Archbishop Paris Count von Lodron. Chivako ichi chakanzi Wallistrakt kubva kumugari Maria Franziska Countess Wallis.
Chikamu chekaresa cheturakiti reWallis ndicho chinonzi chivakwa chechivanze chine nhurikidzwa nhatu inoumba madziro ekumadokero ecathedral square. Zvitoro zvinopatsanurwa nezvidimbu zvakati sandara, zvakanamirwa zvakachinjika panogara mahwindo. Iyo furati facade inosimbiswa yakatwasuka nemakona ekona mapilasta uye hwindo maaxes.
Imba huru yechivako chedare arch yaive pa2nd floor. Kuchamhembe, inoganhurana nechokumaodzanyemba bapiro rekugara, kumaodzanyemba, paArchabbey yeSt. Kurutivi rwekumaodzanyemba kwechivako chedare arch kune Museum St. Peter, chikamu cheDomQuartier Museum. Dzimba dzaWolf Dietrich's prince-archbishop dzaive munzvimbo ino yekumaodzanyemba kwechivako chedare arch.
Imba yekutandarira inzvimbo ye3-axis, 2-storey mbiru horo yakavakwa muna 1604 pasi pePrince Archbishop Wolf Dietrich von Raitenau. Mavharo echivanze anobatanidza Domplatz neaxis Franziskanergasse Hofstallgasse, iyo inomhanya orthogonally kumberi kwekathedral uye yakapedzwa muna 1607.
Nemaberere echivanze munhu aipinda pamberi pechechi yecathedral kubva kumadokero, sokunge kuti nomunzvimbo yokukunda. Iyo "porta triumphalis", iyo yakatanga kuitirwa kuvhura nemaarch mashanu kuCathedral Square, yakaita basa pakupera kwekufora kwemuchinda-archbishop.
Salzburg Cathedral yakatsaurirwa kuhll. Rupert naVirgil. Kutsigira kunopembererwa musi wa24 Gunyana, Zuva reSt. Rupert. Salzburg Cathedral chivakwa cheBaroque chakavhurwa muna 1628 naPrince Archbishop Paris Count von Lodron.
Kuyambuka kuri kumabvazuva, pamberi pechikamu checathedral. Pamusoro pekuyambuka kune 71 metres yakakwira chigubhu chekathedral ine makona pilaster uye mahwindo ane rectangular. Mudome mune mafrescoes masere ane mifananidzo kubva muTestamende Yekare mumitsara miviri. Zviratidziro zvine chekuita nezviitiko zvePassion yaKristu mugungwa. Pakati pemitsara yefrescoes pane mutsara une mahwindo. Vamiriri vevaevhangeri vana vanogona kuwanikwa pachikamu chepamusoro pedome.
Pamusoro pembiru dzakatenuka dzekuyambuka kune trapezoidal pendants yekuchinja kubva pa square floor plan yekuyambuka kuenda kune octagonal dhiramu. Dome rine chimiro cheimba yemamongi, ine nzvimbo yakakombama inova nhete yakananga kumusoro pamusoro peiyo octagonal base yedhiramu kudivi rega rega reporigoni. Mukati me vertex pane chivakwa chakavhurika pamusoro peziso redenga, mwenje, umo Mweya Mutsvene unogara senjiva. Kuyambuka kunogamuchira kunenge kwese kwechiedza kubva kudome lantern.
MuSalzburg Cathedral mune imwe-nave kwaya chiedza chinopenya, umo mune atari yakasununguka-yakamira yakakwirira, chivakwa chakagadzirwa nemarble chine pilaster uye chakakombama, chinopeperetswa, chinonyudzwa. Pamusoro peatari yepamusoro ine gable yetriangular inopeperetswa yakashongedzwa nemateru ma volutes uye caryatids. Paatari inoratidza kumuka kwaKristu neHll. Rupert naVirgil muchikamu. Mune mensa, tafura yeatari, pane reliquary yaSt. Rupert naVirgil. Rupert akatanga St. Peter, imba yemamongi yekutanga yeAustria, Virgil aive abbot weSt. Peter uye akavaka kathedral yekutanga muSalzburg.
Nave yeSalzburg Cathedral ine mana-bayed. Iyo huru nave inoperekedzwa mativi ese nemutsara wemachapel uye oratorios pamusoro. Madziro akaumbwa nemapilaster maviri muhurongwa hombe, ane shafts akatsetseka uye misoro inoumbwa. Pamusoro pemapilasta pane denderedzwa, cranked entablature pairi iyo dhiramu yevhavha ine tambo mbiri.
Kukwenya kudhirowa kwecornice yakachinjika yakatenderedza madziro emadziro, ichikwevera cornice pamusoro pechikamu chakabudikira. Izwi rokuti entablature rinonzwisiswa kuti rinoreva kuzara kwezviumbwa zvakachinjika pamusoro pembiru.
Mumakamuri ari pakati pepilaster neiyo entablature mune yakakwirira arched arcades, mabhakoni anobudikira akazorora pane volute consoles uye maviri-chikamu magonhi ekutaura. Oratorios, makamuri madiki eminamato akapatsanurwa, anowanikwa sedanda pagalari ye nave uye ane mikova yekamuri huru. Hurukuro kazhinji haina kuvhurika kune veruzhinji, asi inochengeterwa rimwe boka, semuenzaniso vafundisi, nhengo dzehurongwa, hama kana vatendi vakatanhamara.
Maoko e-single-nave anochinjika uye kwaya imwe neimwe inobatanidza mujoko rekona kune sikweya inoyambuka mune semicircle. Mune conche, iyo semicircular apse, yekwaya, 2 ye3 mahwindo pasi anosanganiswa nemapilaster. Shanduko kusvika pakuyambuka nave huru, maoko anochinjika uye kwaya inomanikidzwa nezvikamu zvakawanda zvepilasta.
Iwo trikonchos akazadzwa nechiedza apo nave iri murima-diki nekuda kwechiedza chete chisina kunanga. Kusiyana nehurongwa hwepasi semuchinjikwa wechiLatin, umo nave yakatwasuka munzvimbo yekuyambuka inoyambutswa pamakona ekurudyi neimwe nzira yakatwasuka, mukwaya yemakongi matatu, trikonchos, makongi matatu, kureva semicircular apses ehukuru hwakafanana. , pamativi emakona akafanana neaya akaiswa kune mumwe nemumwe kuitira kuti chirongwa chepasi chine chimiro cheshizha re clover.
White stucco ine anonyanya kushongedza motifs ine dema mune undercuts uye depressions inoshongedza festoons, yakashongedzwa maonero kubva pazasi maarch, nzira dzechapel uye nzvimbo dzemadziro pakati pemapilaster. Iyo stucco inotambanukira pamusoro peiyo entablature ine tendril frieze uye inogadzira kutevedzana kweminda yejometri nemafuremu akanyatsobatanidzwa muvharivha pakati pemakodhi. Pasi pekathedral ine inopenya Untersberger uye tsvuku ine ruvara rweAdnet marble.
The Hohensalzburg Fortress iri paFestungsberg pamusoro peguta rekare reSalzburg. Yakavakwa naArchbishop Gebhard, munhu akarongedzerwa weArchdiocese yeSalzburg, akapoteredza 1077 semuzinda weRomanesque une mudhuri wedenderedzwa wakakomberedza chikomo. Archbishop Gebhard aishanda mudare chapel ya Emperor Heinrich III, 1017 - 1056, Roman-German King, Emperor naDuke weBavaria. Muna 1060 akauya kuSalzburg sabhishopi mukuru. Akanyanya kuzvipira pakugadzwa kweDiocese Gurk (1072) uye Benedictine monastery Admont (1074).
Kubva 1077 zvichienda mberi aifanira kugara muSwabia neSaxony kwemakore 9, nekuti mushure mekuiswa uye kudzingwa kwaHenry IV aive abatana namambo aipikisa Rudolf von Rheinfelden uye haana kukwanisa kuzvisimbisa kuna Heinrich IV. muhubhishopi hwake. Around 1500 dzimba dzekugara pasi paArchbishop Leonhard von Keutschach, aitonga absolutist uye nepotist, dzakashongedzwa zvine mutsindo uye nhare yakawedzerwa kusvika pakuonekwa kwayo. Kukomba kusingabudiriri kwenhare kwakaitika muHondo yeVarombo muna 1525. Kubva pakatanga kuitwa bhishopi mukuru muna 1803, nhare yeHohensalzburg yave iri mumaoko ehurumende.
Kare muMiddle Ages pakanga paine "Rosstümpel" paKapitelplatz, panguva iyoyo ichiri pakati penzvimbo. Pasi peMuchinda Archbishop Leopold Freiherr von Firmian, muzukuru waPrince Archbishop Johann Ernst Graf von Thun naHohenstein, iyo itsva cruciform complex ine makona akakombama uye balustrade yakavakwa muna 1732 maererano nedhizaini yakaitwa naFranz Anton Danreiter, inspector mukuru weSalzburg. mapindu edare.
Kuwanikwa kwemabhiza kubheshi remvura kunotungamirira zvakananga kuboka rezvivezwa, izvo zvinoratidza mwari wegungwa Neptune ane trident uye korona pabhiza regungwa rinoputika nemvura ine 2 mvura-spouting tritons pamativi, zvisikwa zvakasanganiswa, hafu yacho. ine muviri wepamusoro wemunhu uye nehove-yakadzika muviri wakaita sehove ine muswe chimbi, mune Round arch niche mu aedicule ine kaviri pilaster, yakatwasuka entablature uye yakabhenda volute gable kumusoro yakashongedzwa nemavhasi ekushongedza. Iyo baroque, chivezwa chinofamba chakagadzirwa nemuvezi weSalzburg Josef Anton Pfaffinger, akagadzirawo chitubu cheFloriani paAlter Markt. Pamusoro pemabhero ekuona pane chronogram, chinyorwa muchiLatin, umo mavara makuru akajeka anopa nhamba yegore senhamba, nejasi rakavezwa remaoko raPrince Archbishop Leopold Freiherr von Firmian mumunda wegeble.
Chimwe chezvinhu zvekutanga zvaunoona paunopinda muchivanze chikuru chekare chekugara kubva kuResidenzplatz ndiyo grotto niche ine chitubu uye Hercules achiuraya dhiragoni pasi pemataundi ekumavirira vestibule. Hercules depictions zviyeuchidzo zveBaroque commissioned art yakashandiswa senzira yezvematongerwo enyika. Hercules igamba rine mukurumbira nekuda kwesimba rake, chimiro kubva mungano dzechiGiriki. Iro gamba rekunamata rakaita basa rakakosha kuhurumende, nekuti kukwidza kune vanhu vashoma-vamwari kwaimiririra kutenderwa uye kuvimbiswa kuchengetedzwa kwaMwari.
Mufananidzo wekuuraiwa kweshato naHercules wakavakirwa padhizaini yakaitwa naMuchinda Archbishop Wolf Dietrich von Raitenau, aive nemusha mutsva kumabvazuva kwekathedrara yakavakwa patsva uye nekwaakibhishopi chaiko kumadokero kwekathedhira rakanyanya kuvakwa patsva.
Hieronymus Graf von Colloredo, bhishopi mukuru wekupedzisira weSalzburg pamberi pekusatenda muna 1803, aive nemadziro edzimba dzenzvimbo yekugara akashongedzwa nekushongedzwa kwakanaka muchena negoridhe nemuchina wedare Peter Pflauder zvinoenderana nekuravira kwechinyakare kwepanguva iyoyo.
Iyo yakachengetedzwa yekutanga classicist mataira masitofu kubva kuma1770s uye 1780s. Muna 1803 hubhishopi mukuru hwakachinjwa kuva hukuru hwenyika. Nekuchinja kuenda kudare remambo, imba yekugara yakashandiswa nemhuri yeumambo hweAustria seyechipiri yekugara. VaHabsburg vakapa makamuri ehurumende nefenicha kubva kuHofimmobiliendepot.
Imba yemusangano inotungamirirwa nechiedza chemagetsi che 2 chandeliers, pakutanga yakagadzirirwa kushandiswa nemakenduru, akarembera kubva padenga. Chamdeliers zvinhu zvinovheneka, izvo zvinonziwo "Luster" muAustria, uye izvo nekushandisa akati wandei Chiedza masosi uye girazi refract chiedza kuburitsa kutamba kwemwenje. Chandeliers anowanzo shandiswa sechinangwa chekumiririra muhoro dzakasimbiswa.